संविधान संशोधनको साझा मुद्दा अघि सारेका मधेसका दुई दल लागे दुई तिर « News24 : Premium News Channel
संविधान संशोधनको साझा मुद्दा अघि सारेका मधेसका दुई दल लागे दुई तिर
प्रकाशित मिति : Jul 12, 2018
काठमाडौं । आन्दोलन, चुनावी तालमेल हँुदै प्रदेश नम्बर दुईको सत्ता साझेदार बनेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमबीच पछिल्लो समय दुरी बढ्दो छ । प्रदेश नम्बर दुईमा मधेस मिलनको नाममा सफल गठबन्धन बनाई राम्रो मत लिएका यी दुई दल पछिल्लो समय संविधान संशोधनबारे बोलेका समेत छैनन् ।
दुई तिहाई बहुमत प्राप्त शक्तिशाली संघीय सरकारको हिस्सा बन्ने फोरमको निर्णयले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमलाई संवादविहीन अवस्थामा पु¥याएको छ । संविधान संशोधनको शर्तमा सरकारमा फोरम सहभागी भएसँगै त्यही मुद्दामा अडिग राजपा भने एक कमजोर प्रतिपक्षको भुमिकामा खुम्चिएको छ ।
दुई दलबीच संवाद नहुनाले संविधान संशोधनको मुद्दा छाँयामा पारिएको कतिपयको आरोप छ । तर सत्तापक्ष दल फोरम सरकार र पार्टी दुबै यस्मा बचाउका लागि आआफ्नै तर्क गर्दै आएका छन् ।
महाधिवेशन तथा संसदीय दलको नेताको विषयमा आन्तरिक विवाद झेलिरहेको राजपा पछिल्लो समय संशोधनको मुद्दाबारे खासै बोलेको देखिदैनन् । न त वर्तमान सरकारले नै राजपालाई चासो दिएको देखिन्छ । तर राजपा महासचिव केशव झा उक्त कुरा अस्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन् – संविधान संशोधनकै अडानका कारण सरकारमा गएनौँ ।
सत्ता भोग गर्न तछाडमछाड हुनु मधेशको राजनीतिको नियति बनेको छ । पहिलो संविधान सभा देखि अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुन् मधेश केन्द्रित दलले गरेको गतिविधिले यो कुरा प्रमाणित गर्छ ।
संविधान संशोधन एक मात्र जीवन्त मुद्दा हो मधेशको राजनीतिमा । यसलाई राजनीतिक लाभको बाटो मात्र बनाईए यसले दीर्घकालीन रुपमा मधेसका वाहक मानिएका यिनै दुई दललाई नोक्सान हुने विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ ।
प्रधानमन्त्री देखि नेताको मालामोह, विश्लेषकको नजरमा : सामन्ती संस्कार
बाबुराम भट्टराईको दौरा सुरुवाल पहिरन, परिवर्तन वा ‘मिडिया स्टन्ट’ ?
नेकपाले दियाे पाठकले घुस लिएको भिडियो अख्तियारको जिम्मामा
मेलापातमै ब्यस्त चेलीहरु भन्छन्–‘पढ्ने रहर नभएको कहाँ हो र ?’
कांग्रेस मुख्यालयमा गाइजात्रा : उप सभापति निधि र सहमहामन्त्री महत नै जाइलागे विद्यार्थीमाथि
नेपाल हिन्दु, बौद्ध र किरात धर्मको उद्गम स्थल हो : कमल थापा
कर्मचारीको कनेक्सनमा ठग्ने मेनपावरको स्टिङ-५ लाख फिर्ता, अष्ट्रेलियाका विद्यार्थीका फलोअप ! (भिडियो)
access_time 11:27 pm
गायक धर्मेन्द्र सेवनको ‘कता हिँडेकी’ सार्वजनिक
access_time 10:01 pm
अनुहारमा चमक ल्याउने घरेलु उपाय
access_time 9:54 pm
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३४३ औं एपिसोड हो ।
काठमाडौं । गायक धर्मेन्द्र सेवनको स्वरमा नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बिहीबार
काठमाडाैँ । अनुहारको छाला सफा र गोरो बनाउनको लागि मुसुरोको दाललाई मोटो धूलो सुख्खा पाउडरजस्तो